I-China OMASKA Isikhwama Sesikhwama Sanabukeni Esiphethe Iphedi Yokushintsha Ephathwayo Izikhwama Ezinkulu Ze-Unisex Zezingane Eziningi Ezisetshenziselwa Ukubuyela Emuva Iphakethe Lomama Ubaba #HS2015-2 Umkhiqizi Nomphakeli | Omaska
I-Omaska ​​Diaper Bag BackpackM...
I-OMASKA Diaper Bag Backpack ...
Omaska ​​dipaer ubhaka wesifazane...
OMASKA amanzi amaningi asebenzayo...
I-OMASKA Diaper Bag Backpack ene-Portable Changing Pad Enkulu I-Unisex Yezingane I-Multipurpose Travel Back Pack Yomama Ubaba #HS2015-2
Indwangu: 210D i-polyester
30 ama-pcs ibhokisi ngalinye, usayizi webhokisi 50x60x70CM, 18.5kgs ibhokisi ngalinye
I-oda le-OEM/ODM (ilogo yokwenza ngokwezifiso)
Yamukela i-oda le-SKD (Semi-Knocked Down).
50% T/T njengediphozithi, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa
Isikhwama sikamama siklanywe ngokukhethekile futhi sikhiqizwa ukuze kube lula ukunakekela izinsana nezingane ezincane. Imikhiqizo yezinsana, izingane ezincane kanye nomama ifakwa esikhwameni ngokuhlukana ukuze kube lula komama ukuthi bakhiphe izingane zabo.
Ukusetshenziswa Ukuvakasha/Ilaptop/Nsuku zonke/Ibhizinisi Ukupakisha Umkhiqizo (1)Isikhwama se-PP+ibhokisi(2)Ingenziwa ngezifiso
Isikhathi Sentengo EXW, FOB, CNF,CIF,DDU, njll Imigomo Yokukhokha T/T, Western Union, L/C
Port of Loading TIANJIN, ECHINA Imininingwane Yokuthunyelwa Ngolwandle/ngomoya/namazwe/i-express
Isikhathi Sokuhola Isampula 1.ojosaka abavamile:3-9 izinsuku Isikhathi Sokuhola Ukukhiqiza 500-1000 : 20-25 izinsuku
1K-5K: 25-35 izinsuku
5K-30K: 35-45 izinsuku
2.ojosaka abayinkimbinkimbi: 9-14days >30K: ngaphezu kwezinsuku ezingama-45
ojosaka abayinkimbinkimbi:kuxoxwa ngazo ngokwehlukana
1) Umkhiqizi ophezulu we-R&D ogxile ku-R&D wamajosaka ahlakaniphile
2) Umkhiqizi weminyaka engu-21 ozinikele ekuthuthukiseni ojosaka abahlakaniphile
3) I-MOQ encane ukusekela amaklayenti amasha
4) ukulethwa okusheshayo ASAP
OMASKA BRAND ISINGENISO
Ifilosofi yebhizinisi ye-OMASKA: Ngenkundla yethu yokwanelisa abantu abaningi Ngemikhiqizo yethu ukuze kuzuze amakhasimende amaningi
Umoya webhizinisi:Ukwenza wonke umkhiqizo ngokucophelelaUkunikeza ikhasimende ngokucophelela
Umgomo wethu:Ukwenza ukuhamba kube lulaUkuba umhlinzeki ongcono kakhulu wemithwalo nobhaka
1) Ithimba lochwepheshe elizokusebenzela: kade lisebenzela amabhizinisi ayi-1580
1) Ukusebenza kahle: amahora angu-8 wesampula kanye nezimpahla zokulethwa kwezinsuku eziyi-7 (ngokushesha)
2) Izinsuku ezi-3 isibuyekezo esisodwa sokuqhubeka kwe-oda.
3)Impendulo ye-imeyili phakathi kwamahora angu-3 (isikhathi sokusebenza).
4)Yenza amasampula uze waneliseke.
5) Nikeza uhlelo lokukhiqiza nezithombe ukuze uhlale unolwazi mayelana nesimo sokukhiqiza.
6) Isampula lomkhumbi ukuze lihlolwe ngaphambi kokukhiqizwa ngobuningi.
7) Ukulethwa okufika ngesikhathi kuqinisekisiwe.
I-1) isikhathi sekhwalithi yezinsuku eziyi-15.
2) 365 izinsuku zokuqinisekisa ukushintshana kwezimpahla.
3) Nikeza isiqondiso sokumaketha.
4) Njalo ngekota, ukwethulwa komkhiqizo owodwa.
Q: Ingakanani inani elincane le-oda lakho le-backpack?
A: I-MOQ ingu-600pcs/design, kodwa sizozama konke okusemandleni ethu ukusekela uma ngaphansi kuka-600pcs/design.Ngombala noma iphethini, ngokuvamile i-MOQ ingu-300pcs/umbala(iphethini).
Q: Hlobo luni lolwazi okufanele luhlinzekwe uma ngidinga intengo/i-quote ye-backpack?
A:Inani Le-oda, Ilogo Eyenziwe Ngezifiso nezinye izidingo, Isikhathi Sentengo(EXW,FOB,CIF njll.) nezinye izidingo uma unayo.
Q: Ungakwazi yini ukwenza ngokwezifiso ubhaka ngokusho kwemiklamo yethu noma amasampula?
IMP: Yebo, singahlinzeka ngezinsizakalo ze-OEM noma ze-ODM ngokwezidingo ezihlukene zamakhasimende, sinolwazi olucebile nochwepheshe ngokuhleleka okwenziwe ngokwezifiso, ngakho-ke siyakwazi ngokugcwele ukwenza imikhiqizo ngendlela oyifisayo ngemiklamo noma amasampula akho, futhi sinikeze iziphakamiso zokukusiza. inkampani yakho ukuxazulula imibuzo yobungcweti ehlobene noma izinkinga.
Q: Yiziphi izinzuzo zepotimende lakho le-OMASKA kanye nefektri ye-backpack?
A:Imikhiqizo yethu eyenziwe ngezinto zokuvikela imvelo;
Ithimba lochwepheshe elisebenzele izinkampani/abasabalalisi/abathengisi bezitolo eziyi-1,250 ukukusiza;
Isampula yokulethwa kwamahora ayi-8 kanye nezimpahla zokulethwa kwezinsuku eziyi-7;
Uneminyaka engu-15 yokuhlangenwe nakho kochwepheshe ekuklameni imikhiqizo yesikhwama ehlakaniphile.
Q:Asinayo eyethu idizayini yamajosaka. Ungakwazi yini ukwamukela i-oda le-ODM?
A: Yebo, sinethimba labaklami elinolwazi olucebile ekwakhiweni kukajosaka, ngakho-ke singahlinzeka ngesevisi ye-ODM ngokwezidingo zamakhasimende kodwa izindleko zokuklama eziphusile zojosaka kufanele zikhokhelwe.
Q:Ngingalithola isampula likabhaka ukuze ngihlolwe?
A: Yebo, akunankinga. Singahlinzeka ngesampula yama-backpacks.
Q:Ithini isikhathi sokukhokha?
Q: Liphi ipotimende lakho le-OMASKA nefekthri ye-backpack?
A: Owethu OMASKA ipotimende & ubhaka ifektri itholakala Baigou, China.
Okwedlule: Isampula yamahhala yasefekthri I-China Sports Backpack - Ilogo yangokwezifiso ibhizinisi lekhwalithi ephezulu 15.6 ubhaka wekhompyutha enayiloni eluhlaza okwesibhakabhaka - Omaska
Olandelayo: I-Omaska ​​Diaper Bag BackpackMultifunction Waterproof Travel Back Pack yabesifazane#BRD262
Isikhwama sesikhwama se-diaper esinephedi yokushintsha ephathekayo
I-Multipurpose Travel Back Pack Yomama
I-OMASKA YENZE NGENZA Ilogo ye-OEM HS810 FACTORY DIRECTL...
I-OMASKA YENZA ngokwezifiso Ilogo ye-OEM HS810 IFKKHI NGOKUQONDILE NGOKUQONDILE IFESHION YOMTHETHO WONKE IMIQEQESHO ENKULU YAMANQAKU OKUNGENZIWA AMANZI OKUNGEZESIFUNDAZWE Ingabe ubhaka ongu-20l mkhulu ngokwanele ukuba ungangena esikoleni? Ubhaka wesikole onamandla aphakathi kwamalitha ayi-15 no-20 mkhulu ngokwanele. Lawa majosaka ahlangene, kodwa ngokuvamile anezindawo ezengeziwe zokugcina isibali, amapeni, nokhiye. Kukhona futhi ojosaka abaningi abancane abanekhompuyutha ephathekayo nethebhulethi. Yini...
2020 Isikhwama Esigoqekayo Esisha Esiphathekayo I-Ultralight W...
Ulwazi Lomkhiqizo Umbala otholakalayo: Mnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okotshani, owolintshi, ompunga. dark.blue, l.blue Osayizi Bomkhiqizo 34*20*55CM Isisindo Sento 0.38KGS Isisindo Esiphelele 0.48KGS Ilogo yomnyango Omaska ​​noma Ilogo Engokwezifiso Into yemodeli yenombolo RW531# MOQ 50pcs ngombala ngamunye Isikhundla Sabadayisi Abangcono Kakhulu 18005#, 18811#, 18811 #, 8774#, 023#,1901# Iwaranti Nokwesekwa Komkhiqizo Iwaranti: unyaka ongu-1 ka-2020 Isikhwama Esigoqwayo Esisha Esephathekayo I-Ultralight Waterproof Outdoor Multifunction Storage Folding Bag
OMASKA 2021 fashion design whoelsale HS2036 Umama...
Ulwazi Lomkhiqizo Umbala otholakalayo: ************* Inombolo Yento: HS2036# Osayizi: 26x18x41CM NW: 0.60 KGS GW: 0.62 KGS Umnyango: Ilogo yomuntu omdala onga-unisex: Omaska ​​noma ilogo eyenziwe ngokwezifiso MOQ 600 pcs Okungcono Kakhulu Isikhundla Sabathengisi HS2036# Iwaranti Nesiqinisekiso Somkhiqizo Wokusekela: unyaka ongu-1 OMASKA 2021 Idizayini yemfashini whoelsale HS2036 Umama Ubhaka Wengane
I-Canton Fair OMASKA OEM ODM ibhizinisi elingangeni manzi...
Osayizi Bomkhiqizo 50*31*14CM Isisindo Sento 0.7KGS Umbala Ompunga Oluhlaza Oluhlaza Ukupakisha Isikhwama esisodwa sesikhwama se-pp, ama-35pcs ekhathoni elilodwa, usayizi wekhathoni 50*60*70cm Ilogo ye-Omaska ​​noma inombolo yelogo Eyenziwe ngokwezifiso 004 MOQ 100 PCS Izinga Labathengisi Abangcono Kakhulu USB Iwaranti ye-Port Reflective Strip yokushaja kanye newaranti yomkhiqizo wokusekela: unyaka ongu-1
Ubhaka wokuqwala i-Omaska ​​60L Umthamo Omkhulu wamanzi...
Ungakhetha kanjani i-backpack yangaphandle? Okokuqala, ngokuya ngomthamo wakho wokuthwala (ukuthwala isisindo) kanye nezidingo zokusebenzisa, njengebanga lokuhamba, isikhathi, njll., khetha ukuthi ungakanani ubhaka owudingayo Bese kuba nokukhethwa kokusebenza: ukungangeni kwamanzi, ukumelana nokugqoka, umbala, impahla, noma ngabe idizayini yesistimu yokuthwala ikhululekile futhi inengqondo, noma ngabe kukhona ubakaki wangaphakathi, njll. Amagama ohwebo Ukusetshenziswa Kokuhamba/Ilaptop/Nsuku zonke/Ukupakishwa Komkhiqizo Webhizinisi (1)Isikhwama sePP+ibhokisi(2)Kungaba ...
Isikole se-polyester esiphrintiwe esikhulu sangokwezifiso...
Ulwazi Lomkhiqizo Umbala otholakalayo: Omnyama, ompunga, Osayizi Womkhiqizo Oluhlaza 32*15*50CM Isisindo Sento 0.7 KGS Isisindo Esiphelele 0.8 KGS Umnyango Unisex-Omdala Ilogo Omaska ​​noma Ilogo Engokwezifiso Into yemodeli yenombolo 1928# MOQ 500 PCS Abadayisi Abangcono Kakhulu, 1805# Rank 1805# , 1811#, 8774#, 023#,1901# Iwaranti Nokwesekwa Komkhiqizo Iwaranti: Unyaka ongu-1 ubhaka owenziwe ngokwezifiso omkhulu ophrintiwe we-polyester wesikole we-laptop